Zvemagariro Midhiya: Matipi matatu Kuti Zvirinani Kubatana Nevatengi Vako | Martech Zone
Chipiri, Mbudzi 19, 2019 Chipiri, Mbudzi 19, 2019 Thibaud Clement
Mukukosha, midhiya enhau inzira mbiri-nzira, uko mabhenji anogona kuenda kupfuura echinyakare kushambadzira kushambadzira, uye kunyatso batana nevatengi vavo kukudziridza kuvimbika nekufamba kwenguva. Heano matatu matipi ayo kambani yako yaanogona kushandisa kusangana zviri nani nevatengi vako pasocial media.
Zano # 1: Seta Iyo Sisitimu Kuti Usatombopotsa Chiziviso
Kana iwe urikudhinda zvemhando yepamusoro zvemukati pane ako enhau midhiya nhoroondo uye nekukudza vateereri vako zvakanyanya, mikana ndeyekuti vateveri vako nevatengi vako varikuzobatana neako brand. Iyi idanho rakanaka raunoda kutsigira, kuti uwane vamiriri avo, vanozoparadzira zvirimo neshoko remuromo uye nekupa mukukura kwevateereri vako.
Nzira yakatsigirwa yekuzadzisa izvi ndeyokupindura, nekuita shuwa kuti iwe unoziva uye nekupindura nekukurumidza kune ese makomendi, @mentions uye zvakavanzika mameseji akatumira nzira yako. Kukurukurirana kwese kunomiririra mukana wekuratidzira kuti une hanya sei nevateereri vako, nekutenda mhinduro inokatyamadza uye kuteerera / kuita pane mashoma manzwiro ekubata kumeso.
Ichi chinhu chaunogona kuzadzikisa nekubatanidza ako enhau midhiya maakaunzi kune yako yevatengi hubhubhu / software, kushandisa zvakazara email uye kusundira ziviso masisitimu anopihwa neakawanda masocial network kana kushandisa vateereri kusangana mhinduro senge Loomly.
Nei izvi zvichikosha: Zvinoenderana nesisitimu yekudzokorodza, vanhu vanowanzo kupindura chiito chakanaka nechimwe chiito chakanaka, zvichiita kuti chimbo chako chivake hukama huripo nekutsinhana.
Zano # 2: Vaka Iyo Yevatengi Nharaunda
Kuvepo pasocial media nemaakaundi-anowanikwa pachena maakaundi ndiyo hwaro hwebudiriro yedhijitari kushambadzira zano, sezvo ichipa simba chiratidzo chako kupenya uye kupisa kumusoro kwefanera yako nevatarisiri vatengi.
Mumwe mukana wekutora zvinhu kuenda padanho rinotevera ndiko kuramba uchimisa midhiya enhau mumugwagwa nekugadzira - uye kuchengetedza - nharaunda yakavharwa yakatsaurirwa kune vatengi vako varipo, semuenzaniso neFacebook Group.
Maitiro aya anotendera iwe kuti uenderere mberi kwehunhu hwehukama hwehukama hwako nevatengi uye uvape iwo mukana wekubatana nevamwe vanhu vanogovana zvido zvakafanana - kuti pakupedzisira ubatane pamusoro pechiratidzo chako uye / kana chigadzirwa nenzira yekuzvimiririra.
Nekudaro, izvi zvinokupa iwe mukana wekupa mubayiro kunhengo dzakabatikana zvikuru dzeboka nezvinhu zvisingaonekwe, senge kusveverera kupinda muzvikamu zvitsva, kutanga kwekutenga kwakazvimirira uye kukoka kuzviitiko zvekambani zvega.
Nei izvi zvichikosha: Kugadzira pfungwa yekuve yekukwezva kune zvinodiwa nevanhu zvekuti vatengi vako vanofanirwa kuve nhengo inogamuchirwa yeboka uye zvinokonzeresa kubatana kwepamoyo pakati pevatengi vako uye neako marashi.
Zano # 3: Tarisa Wako Brand Kwese Kwese Online
Paunowedzera kukura, iko kukwirira mukana wevatengi vako kune yako mhando pane chiteshi chausiri chako kana kudzora. Nekudaro, nekuda kwekuti vatengi havabvunze iwe mubvunzo zvakananga, hazvireve kuti haufanire kuupindura, kunyanya zvine chekuita nechiratidzo chako.
Nekumisikidza yambiro pazita rako rezita, kungave neyakareruka (uye yemahara) Google Alert kana ine mhinduro yepremiamu yakadai seKutaurwa, iwe uchazoziviswa nguva yega yega munhu pa internet paanoshandisa zita rechiratidzo chako.
Uyu mukana wakasarudzika wekujoinha nhaurirano dzakakodzera uye nekupa zvakawandisa nekupa rutsigiro - kana kunyangwe zano - kupi uye rini uye pavanotarisira uye varipo vatengi vangangotarisira.
Nei izvi zvichikosha: Kunzwa kwekushamisika ndeimwe yeakanyanya madhiraivha emanzwiro anogona kusangana nemunhu. Kana iwe ukabatana nevatengi munzira dzisingatarisirwe, yako mhando inowedzera rudo rwekuda uye inovaka kufarira.
Yakakosha Kukwikwidzana Kubatsira Kwako Kambani
Munguva yedhijitari, uko kuwanda kwesarudzo kuri iko kwakajairika, kuvaka rakasimba brand vanhu vanogona kuenderana uye kuziva pamwe naro kuri kwakakosha kubudirira chinhu. Zvirinani kubatana nevatengi vako ndiyo nzira yekuenda kukudziridza chisungo chemweya, kuvaka kuvimba uye kuwedzera kuvimbika. Uku ndiko kumwe kwekudyara kwakangwara uko kambani yako inogona kuita.
Nekuda kwechinhu chayo chemagariro chikamu, vezvenhau inzvimbo yakanakisa yekutanga. Kugadzira maitiro ekugara uchipindura kusangana kwevateereri vako, kuvaka nharaunda yakasarudzika uye inopa mubayiro kune vako varipo vatengi uye kuongorora chako chiratidzo kunze kwenzvimbo dzako dzaunadzo sarudzo nhatu dzekufunga.
Tags: nharaunda yevatengipasocial media mutengipasocial media kuteereramagariro enhau
Thibaud Clement ndiye Chief Executive Officer uye Co-Muvambi weLoomly. Kubva zvaakapedza kudzidza kubva kuGrenoble Ecole de Management, France neYunivhesiti yeOttawa, Canada kumashure muna 2011, Clement akashanda nemukadzi wake uye nemumwe waanoshanda naye, Noemie, achivhura mabhizinesi mana akabudirira.
Procrastinator's Nhungamiro kuHoridhe Kushambadzira